avylavitra · Desambra 2011 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Desambra, 2011
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Desambra, 2011
Bahrain: Mpampiasa Twitter Voafonja Nandritra Ny 66 Andro Noho Ny Fandefasana Bitsika
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Desambra 2011
Ny tontolo Arabo dia malaza amin'ny fisamborana sy fampijaliana ireo bilaogera sy mpiondana aterineto ary tsy taraiky amin'izay i Bahrain. Mpampiasa Twitter iray no nandefa bitsika mitantara ny zavtra niainany nandritra tato anatin'ny andro vitsy mba hizaràna ny tantarany amin'izao tontolo izao. Miteny izy fa voafonja nandritra ny 66 andro...
Ho An'ireo Shinoa Mpiondana Aterineto, ny SOPA Dia Rindrimbe Iray Hafa Indray
Etazonia08 Desambra 2011
Niteraka fanehoan-kevitra feno fanalàna azy teo amin'ny tontolon'ny aterineto miteny Shinoa ny momba ny lalàna Stop Online Piracy Act (SOPA), na Fandraràna ny Fijirihana ao amin'ny Aterineto izay andrasana ho entina hofidiana eo amin'ny Antenimiera Amerikana alohan'ny faran'ny taona. Voakinan'ny Amerikana foana ny governemanta Shinoa tamin'ny fanelingelenana ny fivezivezen'ny vaovao...
Syria: Afaho i Razan Ghazzawi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Desambra 2011
Nosamborin'ny manampahefana Siriana tao amin'ny sisintany manasaraka an'i Jordania sy Syria androany (Alahady 04 Novambra2011) ilay bilaogera Razan Ghazzawi. Teny an-dàlana hanatrika ny atrikasa momba ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety eo amin'ny tontolo Arabo izay hatao ao Amman i Ghazzawi no izao voasambotra izao. Niteraka fanakianana sy hatezerana avy amin'ireo bilaogera...